Optimum Aluminium Ceiling
- မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူခြင်း။ - တစ်ချပ်ခြင်းအလိုက်တိကျ၊ ညီညာ၍ ကွက်တိဖြစ်ခြင်း။ - ရေငွေ့အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ chemical ခံနိုင်ခြင်း။ - အိမ်တွင်း (Indoor) တွင်သုံးပါက မျက်နှာပြင်၏ Colour သည် &lt;၁၀&gt;နှစ်ခံခြင်း။ - Flexible Supension စနစ်ဖြစ်သဖြင့် ဖြုတ်/တပ်ရလွယ်ကူခြင်း။ - မီးမကူးနိုင်ခြင်း။ Supermarket, Service / Toll Station, Underground, Toilet, Hotel, Restaurant, Kitchen, Hospital, Health-Centre, Sport Centre အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
သေသပ် လှပသော ကြမ်းခင်း အလှဆင် ပစ္စည်း ကတ္တီပါ ကော်ဇော် ( Carpet )
Silver Lotus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်သုံး၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသုံး ၊ ဟိုတယ်သုံး ၊ အစည်းဝေးခန်းမသုံး ကော်ဇော်များ ( Carpets ) များကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။ ၄င်းကော်ဇော် များကို ကတ္တီပါသားတို့ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြောင့် သန့် ရှင်း သေသပ် လှပပီး နူးညံ့ လှပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် ၊ ဟိုတယ် ၊ ခန်းမ စသော အဆောက်အဦး များ၏ အောက်ခံ ကြမ်းခင်းများကို အလှဆင်ရာ တွင်အသုံးပြုနိုင်သော အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ကြမ်းခင်းများကို အလှဆင်ရာတွင် ၄င်း ကတ္တီပါ ကော်ဇော် ( Carpet ) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြု အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်း တို့ အနေဖြင့် ကြမ်းခင်းများကို အလှဆင်ရန်အတွက် ၄င်း ကော်ဇော်များ ( Carpets ) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Silver Lotus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါ သည်။
TPI M 198 Masonry Cement
PI 198 is specially designed for plastering and monsonry by mixing it withaspecial chemical to eenchance the quality. Simply mix TPI 198 with sand in the ratio as recommended the mixture can be spread smother and gives wider area of plaster the mixed cement. With its strength quality reliability and durability. TPI 198 can help the user by working easier, reducing unnecessary expenses and eliminating problem noemally found in ordinary mixed cement (eg. scaling or cracking). Besides, TPI 198 is well suited for smwll concrete work for instance, limitel work light and load.
သာယာဝတီမြို့ရှိ ကျွန်တော်တို့ Customer တစ်ဦး၏ အိမ်ကို Ls 9806 ဖြင့် ခင်းပေးထားသည့် ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Floorking ဈေးနှုန်းက ပစ္စည်းလက်ခ အပြီးအစီးဈေးနှုန်းပါခင်ဗျာ။ ၁၀ပေ ပတ်လည် ၁ကျင်းကို ကြမ်းခင်းပြား အချပ်အရေအတွက်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ စကာတင်၊ ဘိတင်၊ ဖော့ နှင့် တခြားလိုအပ်သည်များကို လိုအပ်သလို သုံးစွဲပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။ FloorKing Brand က ဖယောင်းအပြည့်အဝ သွင်းထားခြင်း ၊ ရေစုပ်ယူမှု အားနည်းတဲ့ ကြိတ်သားမဟုတ်တဲ့ HDF Density အမြင့်စားဖြင့် အတွင်းသားကို ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားပါကေးတွေထက် ရေစိုခံနိုင်မှု မာကြောမှု ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Sample အပြားကို ရေထဲမှာ စိမ်ထားရင် ၈ နာရီခံပါတယ် ခင်ဗျာ။ အပေါ်ယံ ရေစိုဝတ် (ရေခြောက်အောင် ညစ်ထားတဲ့ အဝတ်) ကို ကြမ်းတိုက်တာတို့ ရေတစ်ခါတစ်ရံ မှောက်ကျတာတို့ကို ကောင်းကောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကြမ်းခင်းအောက်မှာ အမြဲရေဝပ်ပြီး ရေနဲ့ထိတွေ့နေမယ် ဆိုရင်တော့ ပွလာပါလိမ့်မယ်။ Laminate ကြမ်းခင်းပြား၏ သက်တမ်းက ရေနဲ့ ထိတွေ့မှု မရှိဘူးဆိုရင် ပျှမ်းမျှ ၁၅ နှစ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ။
Natural Clay Floor Tiles သဘာဝမြေသား ကြမ်းခင်းပြား
Natural Clay မှ Floor Tiles များကို အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်ထားသည်။သဘာဝစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရေညိုမတက်ခြင်း၊အလွယ်တကူ ဆေးကြောနိုင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရမည့် စရိတ်သက်သာခြင်း၊ ဆေးကြောရုံ ဖြင့် အသစ်တိုင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိူးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်။တွဲဆက် ပစ္စည်းများ ကို စောင့်စရာမလိုပဲ အချိန်မရွေး ရရှိနိုင်သည်။အလွန်အကြမ်းခံ၍ တာရှည် အသုံးပြုနိုင်သည်။သဘာဝ ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ဒီဇိုင်းစုံ နှင့် အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင် ရရှိနိုင်သောကြောင့် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးအလှဆင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
လှပသေသပ်သော Utopia Roofing
TPI Concrete Roof Tile reducing temperature thriughaspecial insulation layer in the cement. high quality cement from TPI certied ASTM C-15 and TISI 15-2547 increasing strength and durability of the concrete roof tile. The newest technology in color mixing creating beauty and longevity of the concrete roof tile.
ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လှပသော Laminate Flooring
လှည်းတန်း ၇လမ်း ကမာရွတ် မြို့နယ်ရှိ အိမ်ကို LN-916 ဖြင့် ခင်းထားသည့် ပုံများဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ FloorKing Showroom များသို့ ကြမ်းခမ်းပြား ဒီဇိုင်းများကို လာရောက်လေ့လာပြီး FloorKing စားပွဲတင် ပြက္ခဒိန်များကို နှစ်ဦးလက်ဆောင်အဖြစ် ရယူနိုင်ပါသည်။FloorKing ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာမှာ စကာတင် ဘိတင်တွေက PVC လို့ခေါ်တဲ့ ကော်ပြားကို အသုံးမပြုပဲ သစ်သညးကို အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် လှပသော ကြိတ်သား စကာတင် ဘိတင် ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။&quot; သင့်အိမ်မက်များကို လှပစေဖို့ Floor King ကြမ်းခင်းပြားဖြင့် အလှဆင်စို့ - ယုံကြည်စိတ်ချ လှပကျော့ရှင် Floor King&quot;။ကျွန်တော်တို့ Floor King Laminate ကြမ်းခင်းပြား အရောင်းဆိုင်များကိုပါ တစ်ဆက်တည်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။Floor King Laminate ကြမ်းခင်းပြား အရောင်းဆိုင် - အမှတ် (၅၈)၊ (၅)လမ်း ၊မြေညီထပ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
Modern polished high gloss laminate flooring
ရွှေဟသာင်္လမ်း ၄၇ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံအိမ်ကို ဒီဇိုင်းကုဒ် သုံးမျိူးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။ Ls-8233 ဖြင့် ဘုရားခန်း Ls-7509 ဖြင့် ဧည့်ခန်း၊ LN-916 ဖြင့် အိပ်ခန်းတို့ဖြင့် အလှဆင် ခင်းကျင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရာသေသပ်မှု၊ တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Floor King နဲ့ ဆက်သွယ်ထားခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို အရယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Floor King Showroom များသို့ ကြမ်းခင်းပြား ဒီဇိုင်းများ လာရောက်လေ့လာပြီး Floor King စားပွဲတင် ပြက္ခဒိန်များကို နှစ် ဦးလက်ဆောင်အဖြစ် ရယူနိုင်ပါသည်။ Floor King ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာမှာ စကာတင် ၊ ဘိတင် တွေက PVC လို့ခေါ်တဲ့ ကော်ပြားကို အသုံးမပြုပဲ စကာတင် ၊ ဘိတင် ပစ္စည်းကိုသာ အသုံးပြုပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့ အိမ်မက်များ လှပစေဖို့ Floor King ကြမ်းခင်းပြားဖြင့် အလှဆင်စို့ - ယုံကြည်စိတ်ချ လှပခင်းကျင်း Floor King။ ကျွန်တော်တို့ Floor King Laminate ကြမ်းခင်းပြားများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုချင်ရင် တိုက် (အေ-၃)၊ အခန်း(၁၀) ၊ ယုဇန အိမ်ရာ၊ ဗညားဒလလမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ် သို့လာရောက် ကြည့်ရှူ ဝယ်ယူအာပေး နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Flooring Tiles ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်လှပသော ကြမ်းခင်းများ
သဘာဝမြေသားစစ်စစ်များကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုကာထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊အပူဓာတ်မရှိသောကြောင့် ဖိနပ်မပါပဲ လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်း၊မီးဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ မပါဝင်သည့်အတွက်မီးမလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြင်း၊ပစ္စည်းတပ်ဆင်ရန် လွယ်ကူခြင်း နှင့် လက်ရာသေသပ်လှပခြင်း များ ရရှိစေသည်။ကားကြီးများ ဝင်ထွက်သော လမ်းများအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ထို့အပြင် ရေကူးကန်တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ခြေကုပ်အားကောင်းသော မျက်နှာပြင် ရှိသည့်အတွက် အလွယ်တကူ မချောလဲနိုင်ပါ။ကားနင်းတန်ချိန် (၁၁၀) တန်အထိ အနင်းခံနိုင်ခြင်း၊ အလွယ်တကူ အက်မကွဲနိုင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းရ လွယ်ကူခြင်း၊၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ဆေးကြောရုံဖြင့် အသစ်တိုင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်း စသည့်အားသာချက်များရရှိစေသည်။ဒီဇိုင်းပေါင်း (၃၀၀၀)ကျော်နှင့် ဆက်လက်တိုးမြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ဂျပန်နိုင်ငံ၏ JIS စက်မှုနည်းပညာ နှင့် အညီထုတ်လုပ်ထားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုယ်တိုင်လာရောက် စစ်ဆေးကြည့်ရှုပေးလျက်ရှိသည်။
Laminate Floor Tiles polish
သာယာဝတီသာပဌာန်းကျောင်း ၊ အောင်မင်္ဂလာ ကျောင်းဝင်း ၊ လှိုင်သာယာရှိ ဘုန်ကြီးကျောင်း အစရှိသော သာသနဘောင်များတွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ LD-10078 ဖြင့် Floor King မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားသည့် ပုံများဖြစ်ပါသည်။ Floor King မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးရာမှာ ရေငွေ့ပြန်မှု နဲ့ ရေစိုမှုကို အကောင်းဆုံးထိန်းပေး နိုင်တဲ့ အလူမီနီယံပြားပါတဲ့ ၃ မီလီမီတာ ထူတဲ့ဖော့ကို ကြမ်းခင်းပြား မခင်းခင် အရင်ခင်းပေးပါတယ်။ ပြီးမှ ကြမ်းခင်းပြား ခင်းတာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Floor King ဈေးနှုန်ူက ပစ္စည်းလက်ခ အားလုံးအပြီးအစီး ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းဆိုရာမှာ တကျင်းအတွက် ကြမ်းခင်းပြား အရေအတွက် အတိအကျ ၊ ဘေးဘောင်မှာ အလှဆင်တဲ့ စကာတင် နှင့် ခြေနင်း အခန်းအထွက် ခြေနင်း၊ လှေကားဘောင်နား တိုင်နားတွေမှာ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို သုံးရတဲ့ ဘိတင်တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဘေးမှာ ကာတဲ့ Skirting (စကာတင်) လို လို့ဆိုပြီး အပိုကြေး ဘာမှထပ်မတောင်းပါဘူး ခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့ အထူးအလေးပေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ပုံပါ ဒီဇိုင်းက ၁.၃ မီလီမီတာ အထူရှိပြီး ၁၀ပေပတ်လည် ၁ကျင်းကို ၂သိန်း ၃သောင်း ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချ လှပခင်းကျင်း Floor King.
Silver Lotus ကုမ္ပဏီမှ အဆောက်အဦးများ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အိမ်များ၊ ဆေးရုံး၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ တွင် အသုံးပြုသင့်သော အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် နံရံ ကပ် စက္ကူ ( Wallpaper ) များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း နံရံကပ် စက္ကူများသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်နံရံများတွင် အလှဆင် နိုင်သော အ ရည် သွေး ကောင်းမွန်ပီး ဒီဇိုင်းလှပသေသပ်သည့် ရေဆိုခံ နံရံကပ် စက္ကူ များကို လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် ၄င်းနံရံကပ်စက္ကူများကို အမျိုးစားမျိုးစုံ နှင့် ဒီဇိုင်းပေါင်းစုံ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနံရံကပ်များကို အသုံးပြုအလှဆင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်နံရံ များမှာ ရေစိမ့်ခြင်း ရေဝင်ခြင်းတို့ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်း တို့ အနေဖြင့် ၄င်းအရည်သွေးကောင်းမွန်ပီး ဒီဇိုင်းလှပဆန်းသစ်သည့် အိမ်အလှဆင်နံရံကပ် ပစ္စည်း ( Wallpaper ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုအလှဆင်လိုပါက Silver Lotus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
လှပဆန်းသစ်သော Horizon Stone Granite
There is nothing more breath-taking and awe-inspiring than watching the setting sun stealthily sinking into the vast horizon. And there is nothing more astounding than to manifest their majestic colours into the very threshold of your home. Like palates of colour created by the invisible hands of Nature, then finely embellished onto premium-quality full body porcelain tiles, the warm tones of Sahara and Ash, as well as the complementary cool tones of Dune and Canyon will bring vibrancy to any space it serves to endow.
Prepainted Steel Roofing Sheet,different colour and material
ထူးခြားလှပသော Lucido Granite Tiles
Lucido celebrates brilliance in reflections and brilliance in its creation. Polished, versatile and classic lines that would make every home and office shine through with reflections of perfect symmetry and contemporary artistry. Fill your premises with light and life. Your ultimate luxurious surfaces that silken to the touch, embodying textures that flatters the soles of your feet. It makes everyplace it gracesamouth piece for praises, an eye-piece for admiration andashowpiece of awe.